IiRfid Tags abavelisi - China Rfid tags abaxhasi kunye nefektri
Ingqondo ine-ABS engaphezulu kwama-20 eyahlukeneyo yokukhethwa kwabathengi, ubungakanani / imilo yahlukile ngokweemfuno zabathengi ezahlukeneyo. Wamkelekile uyilo lwe-OEM.
Ezinye izicelo zeRFID zifuna ukufumana iyunithi ethile kwizinto zeqela. I-UHF ye-Inlay ye-LED iyilo elifanelekileyo lokufikelela kwisisombululo sokufumana into, efanelekileyo kwiilebhile ezahlukeneyo zeRFID zokuguqula. Ngesixhobo seRFID jikelele, ifundeka kwaye ifake i-INLAY / tag ene-TID ethile, emva koko ibangele kude i-LED, uqonde umbuzo okhawulezileyo kwaye ufumane izinto ekujolise kuzo! Nceda ukufumanisa indawo yento, ukuphucula kakhulu ukusebenza kokukhangela kunye nenqanaba lolawulo! Ukudityaniswa okugqibeleleyo kokufunda okude kwe-UHF kunye nokukhanya kwe-LED kususa amanqaku eentlungu kwaye kwenza ukusetyenziswa kweRFID kubaluleke ngakumbi!
Umnqobi we-Mini UHF kwithegi yentsimbi
Umnqobi we-UHF ye-serial ye-metal kwithegi yesinyithi yavela kwizinto zesinyithi ezinje ngezixhobo, izixhobo njl.
Itafile ye-serial ye-Conqueror yi-industrial-grade passive UHF TAG, inezinto ezinobushushu obuphezulu, ukumelana ne-corrosion, inqanaba le-IP67 elingangeni manzi, ukumelana nesinyithi kunye nezinye izinto eziphambili.
Nokuba yeyiphi na eqhotyoshelwe kumphezulu wesinyithi okanye ukufakelwa ngaphakathi, kunokufundwa, ukufundwa kweqela, kunye nokufundwa okugcweleyo Isicelo seRFID sinokusetyenziswa ngokubanzi kwaye siphuhliswe ngendlela engenasiphelo!
Ingqondo ibonelela ngezinto ezininzi ezikhethekileyo ze-rfid ezifana ne-RFID tag yokuhlamba iimpahla, i-RFID tag jewelry, ithegi ye-RFID yefestile, ithegi yeRFID, ithegi yengubo ye-RFID njl.
Ithegi yokuhlamba yeRFID
Ithegi yefestile yeRFID
I-RFID yesandla esilahlayo
esetyenziswa ngokubanzi kwipasile yesikhululo seenqwelomoya, ukulandelela ipasile, ukuchongwa kwesigulana, ukuchongwa, ukuphathwa kweentolongo, ukuphathwa kwabafazi noomama.
Ibhanti yesandla seRFID
Izibhedlele ezisetyenziswa kakhulu, iiNdawo zoLawulo lokuFikelela, iiKonsathi, iiAirports njl.
Ibhendi yesandla seRFID Silicone
Isetyenziswa ngokubanzi kwiiKhampasi, iiPaki zokuzonwabisa, iibhasi, iiNdawo zoLawulo lokuFikelela, iiKonsathi njlnjl.
I-rfid tag yolawulo lwe-MT001
Ithegi ye-RFID yokulwa nesinyithi ikwaluhlobo lwethegi ye-elektroniki, esetyenziselwa ukuhambisa kunye nokufumana idatha. Umphezulu uya kusebenzisa izinto ezinokutsala amaza ombane. Esi sixhobo sinezinto ezithile eziluncedo: njengobunzima bokukhanya, bunokumelana nobushushu obuphezulu, ubungqina obumanzi, bunokumelana nokubola.